N'ogbe JS -103 Polycarboxylate superplasticizer 50% (High Water mbenata ụdị) ụlọ ọrụ na-emepụta | Gaoqiang
JS -103 Polycarboxylate superplasticizer 50% (High Water mbenata ụdị)
JS-103 bụ ọgbọ ọhụrụ nke nnukwu arụmọrụ polycarboxylic acid superplasticizer kwadebere site na methyl allyl mmanya polyoxyethylene ether macromonomer site na free radical polymerization, ọ nwere 50% ọdịnaya siri ike.
JS-103 bụ ọgbọ ọhụrụ nke nnukwu arụmọrụ polycarboxylic acid superplasticizer kwadebere site na methyl allyl mmanya polyoxyethylene ether macromonomer site na free radical polymerization, ọ nwere 50% ọdịnaya siri ike. Ọ nwere a elu mmiri Mbelata ọnụego na a ụfọdụ slump nchedo ọrụ, iji hụ na ndị magburu onwe na-arụ ọrụ arụmọrụ nke ihe, elu ike na magburu onwe anwụ ngwa ngwa, tumadi na-eji maka mbupụ, iga anya bụ dịtụ ogologo nne mmanya.
1.The elu mmiri Mbelata ọnụego nwere ike iru ihe karịrị 40%.
2.Low viscosity na obere thixotropy, Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị karị maka ihe na mmiri mmiri ciment ruru
doro anya ma ọ bụ ìhè odo mmiri mmiri
Ba / cm
Mmiri Mbelata Mmiri
Ikuku Nrụgide Ọbara ọgbụgba
Nsogbu ọbara ọgbụgba
Chlorine Ion (Dabere na Solids)
Ọdịnaya Alkali (Dabere na Solids)
Sodium Sulphate Ọdịnaya
Oge na-egbu oge Akpa Concret
1.suitable maka n'oge ike ihe, retarded ihe, precast ihe, igba-na-ebe ihe, eruba ihe, onwe-compacting ihe, uka ihe, elu-arụmọrụ ihe na ihu ihe, nile di iche iche nke ulo oru na obodo ụlọ na agwakọta na ihe nkedo n’ime ebe, ọkachasị maka ihe azụmahịa dị obere.
Enwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ ụgbọ oloko dị elu, ike nuklia, nchekwa mmiri na ọrụ mmiri, ụzọ ụgbọ oloko, nnukwu Bridges, okporo ụzọ awara awara, ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri na mba ndị ọzọ buru ibu na nnukwu ọrụ
3.Ngosi na ụdị nile nke ulo oru na obodo ewu na azụmahịa ihe inggwakọta ojii
4. Adabara ụlọ ọrụ mmepụta ihe, njem njem ogologo oge
1.This ngwaahịa a colorless ma ọ bụ ìhè odo mmiri mmiri. Ngwadogwu a na-atụ aro dị ka n'okpuru: n'ozuzu, 5% -30% nke mmanya na-aba n'anya na-eji ngwakọta obere ihe ndị ọzọ iji mee ka mmiri na-ebelata mmiri. .
2.Tupu i jiri ngwaahịa a ma obu gbanwee udi na akwa nke ciment na gravel, odi nkpa iji meziwanye simmenti na gravel. Dị ka ule ahụ si dị, chepụta nkezi nke ihe na-ebelata mmiri gị n'ụlọnga.
3.A nwere ike iji ngwaahịa a naanị ya ma ọ bụ jikọta ya na mmanya na-eme ngwa ngwa iji belata ihe nkwụsị (ma e jiri ya tụnyere JS-101B, ọ ga-ebelata iji ego eji nwayọ ewepụta nne); Ma ọ bụ mejupụta ya na ngwa mgbakwunye iji nweta admixtures nwere ike iweghachi / ike mbido / mgbochi anwụ / ọrụ mgbapụta. Ekwesịrị ikpebi usoro ntinye na ọnọdụ site na ịnwale na teknụzụ mejupụtara.
4.This ngwaahịa ike ga-eji ọnụ na ndị ọzọ dị iche iche nke admixtures dị ka n'oge ike gị n'ụlọnga, ikuku entraining gị n'ụlọnga, retarder, wdg, na a ga-anwale tupu ojiji. Anaghị agakọ na naphthalene usoro mmiri reducer.
5.Concrete ciment na mix ruru kwesịrị kpebisie ike site ule, Mgbe eji, agwakọta na tụrụ mmiri ga-atụkwasịkwara ma ọ bụ kwukwara na ihe igwekota n'otu oge. Tupu iji, inggwakọta ule kwesịrị rụrụ iji hụ na àgwà nke ihe.
6.When e nwere nọ n'ọrụ admixtures dị ka ada uyi na slag na ruru nke ihe, ego nke mmiri-mbenata gị n'ụlọnga kwesịrị gbakọọ dị ka ngụkọta ego nke cementitious ihe.
Ngwugwu: 220kgs / drum, 24.5 tọn / Flexitank, 1000kg / IBC ma ọ bụ rịọ
Nchekwa: Echekwara na ụlọ nkwakọba ihe ventilated nke 2-35℃ na ngwugwu akpọrọ, na-enweghị ịtọghe, ndụ adịghị adị otu afọ. Chebe site na ìhè anyanwụ na oyi
Nke gara aga: Polycarboxylate Ether Monomer HPEG / TPEG
Osote: JS-104 Onyinye polycarboxylate Superplasticizer 37.5% (Mmiri mbenata ụdị)
Concrete ngwa agha Admixture Mere Na China Polycarboxylate Superplasticizer With High Quality
Polycarboxylate Superplasticizer 40% mmiri mmiri